विधि मिचेर हुने निर्वाचनमा भाग लिन्न : बिष्णु सुवेदी – Durbin Nepal News
विधि मिचेर हुने निर्वाचनमा भाग लिन्न : बिष्णु सुवेदी
माघ २५, २०७६ ४:५६ मा प्रकाशित
अमेरिकामा रहेका नेपाली काँग्रेस समर्थकहरूले फेरि सामाजिक सञ्जाल तताएका छन् । पुस्त्यौली विवादका झगडिया दुई पक्षका एकले अर्कोलाई अर्घेलो देखाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।
विधानतः तीन वर्ष अगाडि नै हुनु पर्ने नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको निर्वाचन अप्रिल ११ र १२ तारिकमा गर्ने मिति प्रस्ताव गर्दै पार्टी केन्द्रमा पठाउने निर्णय सार्वजनिक भए पछि पछिल्लो समय अमेरिकामा रहेका काङ्ग्रेसीहरूको चिसोपना सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको हो ।
मुख्यतया जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनको प्रक्रियाका बारेमा दुई पक्षको भनाई आपसमा बाझिएको छ । जनसम्पर्क समितिले अहिले अगाडि बढाउन लागेको प्रक्रियामा पूर्व संयोजक बिष्णु सुवेदी पक्षले आपत्ति जनाएको छ । पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा त्यसमा असहमति किन जनाउनु पर्यो ? यसै विषयमा दूरबिन नेपाल र बिष्णु सुवेदी बीचको कुराकानीको अंश ।
जनसम्पर्क समितिको पछिल्लो बैठकमा तपाइको नोट अफ डिसेन्ट किन ? तपाइहरु चुनाव विरोधी हो ?
नोट अफ डिसेन्ट अधिवेशन गर्न हुन्न भनेर होइन् । अधिवेशन बिष्णु सुवेदीले चाहेको छ । हिजो पनि चाहेको हो, आज पनि चाहन्छ र भोलि पनि चाहन्छ । अधिवेशन गर्ने तौर-तरिका हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, विधि हुन्छ र विधान हुन्छ । हामीले विधि विधान अनुसार अधिवेशन गर, नेपाली काँग्रेसको एउटा भातृ संस्था भएको हिसाबले र नेपाली काँग्रेसको एक वर्ष अगाडि सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित विधानलाई थप व्याख्या गरेर नियमावली बाहिर आएको छ । सो नियमावलीको परिच्छेद ५ मा जनसम्पर्क समितिहरू कसरी गठन हुने, महाधिवेशन र महासमितिमा कसरी आउने ती सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । हामी त्यही गाइड लाइन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्नेमा छौँ ।
सबैले बुझ्नेगरि नै भन्नुस न तपाईहरुले कसरी अधिवेशन गराउने भन्नु भएको हो ?
अहिले के प्रस्ताव ल्याइयो भने पार्टीको विधि विधानलाई नमान्ने, पार्टीको गाइड लाइन पनि नमान्ने, पहिला टेक्सासमा मैले अधिवेशन गराउँदै गर्दा पार्टीको आदर्श मान्छु भन्ने संस्था थियो । उहाँहरूले भुकम्प पीडितको पैसा हिनामिना पार्नु भयो र त्यो हिनामिनाबाट बच्न मलाई थाहा नै नदिई दुई वर्ष अगाडि अक्टोबर २२ मा संस्थालाई ५०१ सि मा लानु भो । अहिले त्यसैको आधारमा अधिवेशनमा जाउ भन्नु भयो त्यसमा मेरो विरोध हो । ५०१ सि मा जानु हुँदैन पार्टीले निश्चित गाइड लाइन दिई सकेको छ । पार्टीको विधानमा लेखी सकेको छ । पार्टीले सर्कुलर पनि पठाएको छ गत कार्तिक ५ गते, सोही सर्कुलरको आधारमा जाउ भन्ने म लगायत साथीहरूको सुझाव हो तर उहाँहरु होइन पार्टी त नेपालमा हो यहाँ अमेरिकामा यतैको अनुसार हुनु पर्छ भने पछि हाम्रो असहमति रहेको हो । त्यसरी गरिएको अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन भएन त्यो ५०१ सिको अधिवेशन भयो, त्यसरी हुने अधिवेशनमा म लगायत हाम्रो समुहका कोही पनि भाग लिदैनौ ।
पछिल्लो समयमा पार्टी विधानमा जनसम्पर्क समितिको सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिकता वा राहदानी अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी जादा विशेष गरि युरोप अमेरिकामा त संगठन नै नबन्ने भयो त्यसकारण साधरण सदस्यमा पार्टीको विधान आकर्षित नहुने तर महाधिवेशन, महासमिति प्रतिनिधि र क्रियाशिल सदस्यका लागि पार्टी विधान आकर्षित गरौ भन्नु त ठिकै होइन र ?
त्यसरी हुँदैन, त्यो बिल्कुल हुँदैन । पार्टीले अहिले सजिलो पनि बनाएको छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति बनाउनका लागि दशौं हजारको संख्या पनि चाहिदैन । पार्टीको नियमावलीमा स्पष्ट लेखेको छ, ” कुनै पनि देशमा जनसम्पर्क समिति गठन गर्नका लागि ५० जना नेपाली नागरिक भए पछि तदर्थ समिति गठन हुने भनिएको छ” त्यसरी गठन भएको समिति केन्द्रमा पठाउनु पर्ने छ र केन्द्रबाट स्वीकृत भए पछि एक बर्ष भित्र अधिवेशन गर्नु पर्ने भन्ने छ । त्यसकारण नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोगको पोलिसि अनुसार नेपाली भए पनि विदेशि नागरिकता दिई सकेकाहरुले जनसम्पर्क समितिको सदस्यता लिन मिल्दैन्, च्याप्टर र केन्द्रको अधिवेशनका लागि डेलिगेट हुनका लागि पनि विधानमा प्रष्ट लेखेको छ । कि पार्टीले विधान र नियमावली संसोधान गर्नु पर्यो कि जनसम्पर्क समितिले नियमावली अनुसार नै निर्वाचन गर्नु पर्यो । हामी पार्टीका सिपाइ हौ त्यसकारण पार्टीकै निर्देशन अनुसार जानु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिलेको बैठकले अधिवेशनको मिति स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि र पर्वक्षक पठाउन सिफारिस गरेको छ । पार्टीले अधिवेशनलाई मान्यता दियो भने तपाइहरु के गर्नु हुन्छ ?
यसमा भ्रम नपर्नु, तपाइहरुलाई के आएको छ, बैठकमा तयारी समितिका संयोजक (जनसम्पर्क समितिका सभापति आनन्द बिष्ट) ले एउटा क्लालेण्डर जस्तो ल्याउनु भयो, मैले यो प्रस्ताव गर्छु भन्नु भयो, त्यो प्रस्तावका बारेमा छलफल पनि भएन, मैले तपाइ कुन विधान अनुसार अधिवेशन गर्नु हुन्छ, पार्टीको लाइन अनुसार हो कि ५०१ सि अनुसार हो भन्दा त्यसैमा वादविवाद भयो, वादविवादमा तपाइलाई थाहै छ एक थरी साथिहरु माइण्ड सेटअप भएर माइण्ड मेकअप भएका साथिहरु छन् । त्यहाँ संयोजक जीले कालोलाई सेतो हो भने पनि त्यो कालो होइन सेतो हो भन्ने हैसियत र खुबी छैन, संयोजकजीले भने पछि कालो भए पनि सेतै हो भन्ने चलन रहेछ, बैठक त्यसरी नै गयो । त्यहाँ छलफल पनि भएन, उहाँहरु सँग रेकर्ड पनि हुन सक्छ, न त संचालकले भन्नु भयो त त अन्तिममा संयोजकले यो नै निर्णय भयो भनेर भन्नु भयो प्रस्ताव आएको हो निर्णय भएको होइन ।
त्यसो हो भने तपाइहरुको नोट अफ डिसेन्टको कुरा के हो त
हामीले ५०१ सि अन्तर्गत अधिवेशनमा जाउँ भन्दा यदी त्यस्तो हो भने कुनै पनि प्रक्रियामा हाम्रो सहमति रहदैन भनेर शुरुमा नै भनेको हो । तर उहाँहरूले त्यसै निर्णय भयो भनेका हुन् ।
जे भए पनि बैठकको सिफारिस पार्टीले अनुमोदन गर्यो भने तपाइहरु के गर्नु हुन्छ ?
पार्टीले त्यो पठाउदै पठाउदैन, पार्टीले हेर्छ कुन आधारमा चुनाव हुँदै छ भनेर,पार्टीको लाइन अनुसार जनसम्पर्क समिति हिडेको छ कि छैन् त्यो हेर्छ यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले आफ्नो निर्णय दिन्छ ।
अब तपाइहरु विवाद मात्रै गर्दा त निर्वाचन नै नहुने भो नी त
यो कार्यसमिति अत्यन्त असक्षम कार्य समिति सावित भइसक्यो । हिजो पद नपाउदा बिद्रोह गरेर अर्को संस्था जन्माएकाहरुलाई पनि समेटेर मेरो संयोजकत्वमा अत्यन्त दुखका साथ २०१४ मा टेक्सासमा अधिवेशन गरेको हो । विधानले दुई बर्षको कार्यकाल हो । आफैले एक बर्ष थपे । तीन बर्षको अवधीमा सिन्को भाचेनन् । सबैले देखेकै कुरा हो, अध्यक्षले महासचिवलाई निकाल्ने, महासचिवले अध्यक्षलाई निकाल्ने काम भयो । जब पदावधी समाप्त भयो त्यस पछि बिष्णु सुवेदीले मैले तिमिहरुलाई तीन बर्षको म्यान्डेट दिएको हो अब म मान्दिन भनेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय सभापति र महामन्त्रिलाई भने पछि उहाँले मेरै कुरा सुनेर यहाँ निर्वाचन सम्वन्धी कुनै काम अगाडि नबडाउनु भनेर पत्र पठाउनु भयो, पत्र पठाए पछि यदी नैतिकता थियो भने यो कार्यसमितिले त्यति बेला नै छोड्नु पर्ने थियो । अरु १८ देशका कार्यसमितिलाई थप्दा यसलाई पनि ६ महिना म्याद थपेको हो । तर ४ महिना सम्म चुप लागेर बस्ने अब फेरि पद थप्ने र रोइकराइको बहाना हो न यसले अधिवेशन गर्न सक्छ न त अधिवेशन गर्नका लागि नै यो सबै गरिएको हो । यो सबैलाई झुक्याउनका लागि गरिएको हो । तपाइहरु विश्वस्त हुनुस, ६ महिना पुगे पछि यो समिति जान्छ र दुई पक्षबीच सल्लाह गरेर केन्द्रले एउटा तयारी समिति बनाउछ र त्यसै समितबाट निर्वाचन हुन्छ ।